Ny Antesaka na Antaisaka na Tesaka dia vondrom-poko iray ao atsimo-atsinanan' i Madagasikara. Ao amin' ny distrikan' i Vangaindrano, faritra Atsimo-Atsinanana, ao atsimon' i Farafangana, no betsaka azy ireo. Ny faritra onenany dia eo anelanelan' i Mananivo ao avaratra, Itomampy sy Ionaivo ao andrefana, ary Lavibola ao atsimo. Ny teny hoe "Antesaka" na "Antaisaka" dia midika ara-bakiteny hoe "ireo avy any amin' ny Saka", izany hoe "ny Sakalava". Ireto ny foko lehibe ao: ny Antemanambondro, ny Antevato, ny Masianaky, ny Zarabehava, ny Zarafaniliha ary ny Zaramanampy. Tamin' ny taona 2013 dia niisa 600 000 eo ny Antesaka.
Manodidina ny 5 %n4 ny mponina eto Madagasikara ny Antesaka. Manana razambe afrikana sy arabo ary malaiô-indôneziana izy ireo, toy ny Sakalava any amin' ny morontsiraka andrefan'i Madagasikara izay niavian' io vondrom-poko io. Izy ireo dia manana fady mafy amin'ny fanambadiana sy fombafomba fandevenana sarotra. Matetika ny Antesaka no mamboly kafe, akondro ary vary, ary ireo eny amorontsiraka dia manjono. Ny ampahany betsaka amin'ny mponina no nifindra monina tany amin'ny faritra hafa amin'ny Nosy noho ny asa, ary tombanana ho 40 % ny mpifindra monina teo anelanelan'ny 1948 sy 1958 no nanorim-ponenana maharitra tany ivelan' ny tanindrazany Antesaka.
Andriamandresy, andriana sakalava voaroaka tao Menabe taorian' ny herisetra nifandimby teo amin’ny laharan’ny fifandimbiasana no nanorenan’ity vondrona ity. Ny Antesaka dia iray amin'ireo fanjakana efatra lehibe indrindra teto Madagasikara talohan'ny fanjanahantany tamin'ny fiandohan'ny taona 1700, ary ny antoko politika naorin'ny Antesaka mirahalahy teo am-panombohana ny fahaleovantena tamin'ny taona 1960 dia nanohy namoaka mpitarika teo an-toerana sy nasionaly. Tamin'ny taona 2013, tombanana ho 600 000 ny Malagasy antsoina hoe Antesaka.
1 Ny maha izy azy ny Antesaka
3.2 Fombafomba fandevenana
Ny maha izy azy ny Antesaka[hanova | hanova ny fango]
Mifangaro razambe afrikana sy arabo ary malaiô-indôneziana ny Antesaka, ary sampana mpanjaka avy amin'ny Sakalava any amorontsiraka andrefan'i Madagasikara. Eo anelanelan' ny renirano Mananivo ao avaratra, ny renirano Itomampy sy Ionaivo ao andrefana, ary ny renirano Lavibola ao atsimo ny faritra fiavian' ny Antesaka. I Vangaindrano sy i Midongy Atsimo no tanàna lehibe ao amin' io faritra io.
Maro ireo mpanjaka antesaka no taranaky ny Zarabehava, taranaka mpanjaka sakalava izay niampita nankany amin' ny morontsiraka atsinanana teo anelanelan’ ny taona 1620 sy 1650. Nifindra monina avy tany amin' ny Fanjakan' i Menabe ny razamben’ ny Antesaka ary tonga tao Nosipandra (antsoina ankehitriny hoe Vangaindrano) tamin’ ireo taona 1650. Araka ny tantara am-bava dia Andriamandresy no mpanorina ny vondrom-poko antesaka. Izy nantsoina hoe Repila dia teraka tao amin' ny tanànan' i Tsiarepioky akaikin' i Mahabo; dia novany ho Ihazorango ny anarany taty aoriana, ary farany dia nandray ny anarana hoe Andriamandresiarivo ho fiandrasana ny fanendrena azy ho mpanjaka. Nitarika ny vahoaka hanohana ny fandimbiasan' ny zandriny azy ny hambom-pony sy ny ditrany, dia tezitra mafy Andriamandresy ka nikasa haka an-keriny ny tanimbarin' ny dadatoany izy ka naratra mafy tamin' izany. Tezitra ny renin' Andriamandresy ka nandroaka azy amin' ny faritany, ary niainga niantsinanana Andraimandresy niaraka tamin' ny miaramila sy andevo.
Tany am-piandohan' ny taonjato faha-18, ny Antesaka dia iray amin' ireo fanjakana efatra lehibe indrindra eto Madagasikara. Matetika no niadiana ny fifandimbiasam-pitondrana ary niteraka fifandirana anatiny. Araka ny tantara am-bava dia nisy mpanjaka antsoina hoe Ratongalaza tsy maintsy namono na nanao sesitany ny rahalahiny rehetra mba hahazoana ny seza fiandrianana. I Lengoabo, zafikelin-dRatongalaza, no mpanjaka farany sady nanan-danja indrindra tamin' ny taonjato faha-18, ary nahavita nanitatra ny faritanin' ny Antesaka hatramin' ny farany indrindra. Tamin' ny taonjato faha-19, dia notafihin’ ny tafika merina avy amin’ ny Fanjakan' Imerina ao amin' ny faritra avo afovoany ny Fanjakana Antesaka . Tamin' ny fandresen' ny miaramila merina teo anelanelan' ny taona 1820 sy 1853, dia mazàna no novonoina ny lehilahy antesaka voasambotra, fa ny zaza amam-behivavy dia nentina ho andevo tany Imerina. Andevo maherin' ny iray tapitrisa no voasambotra tamin' io fotoana io, ka avy amin’ ny foko Antesaka, Antefasy, Antanosy ary Betsileo ny ankamaroany.
Nanjanaka an' i Madagasikara i Frantsa tamin' ny 1895, ary rava ny Fanjakan' Imerina tamin' ny 1897. Rehefa nikomy tamin' ny mpanjana-tany frantsay, nefa tsy nahomby, ireo foko tatsimo maromaro tamin' ny taona 1904–1905, dia tsy nety nandray anjara ny Antesaka.
Ny fiainam-pianakaviana sy ny fanambadiana indrindraindrindra dia fehezin'ny fady maro. Ny zaza kambana dia heverina ho fady, ary araka ny mahazatra dia novonoina rehefa teraka na navela tany anaty ala mba ho faty. Na dia voarara aza io fomba fanao io, dia mitohy hatrany amin'ny mponina mandala ny nentim-paharazana sasany, ary tsy azo alevina miaraka amin'ny fianakaviany ny kambana.
Fombafomba fandevenana[hanova | hanova ny fango]
Any amin'ny tanàa madinika dia fonenan'izy ireo ny trano iray misy efitra tokana vita amin'ny akoran-javamaniry eo an-toerana. Eo amin’ny ilany atsinanan’ny trano no misy io varavarana fanampiny io mba hamoahana faty amin’ny trano fonenana. Ny fomban-drazana momba ny fandevenana dia ny fanamainana faty mandritra ny roa na telo taona alohan'ny hamindrana azy any amin'ny trano fandevenana iombonana antsoina hoe kibory, izay miafina ao anaty ala masina voatokana ho an'ny lehilahy, antsoina hoe ala fady. Alohan’ny hamindrana ny faty maina eny amin’ny kibory dia manao fombafomba antsoina hoe tranon-donaky ny tanàna. Afindra ao amin'ny trano mitokana ilay faty maina, miaraka amin'ireo vehivavy tao an-tanàna, izay miara-mitomany, ary avy eo mandihy. Mifamotoana ao an-tranon’ny lehiben’ny tanàna ny lehilahy ary mifandimby mandeha any amin’ny tranono misy ny razana mba hametaka vola amin’ilay maty amin’ny alalan’ny menaka. Mandra-maraina, rehefa afindra any amin’ny kibory ny razana, dia mandihy amin’ny amponga any ivelany ny ankizy ao an-tanàna. Entin'ireo lehilahy ireo ny faty any amin'ny ala masina, izay itenenan'izy ireo manokana ny teniny farany amin'ilay maty.
Ny Antesaka dia miteny fitenim-paritra amin'ny fiteny malagasy, izay sampana amin'ny vondrom-piteny malaiô-pôlineziana avy amin' ny fiteny baritô any atsimon' i Bôrneô.
Ny fambolena kafe, vary ary akondro no tena asa fiveloman' ny ny Antesaka; ny vehivavy no tompon' andraikitra voalohany amin' ny fijinjana vary, araka ny fomban-drazana eo an-toerana. Ireo monina eny amorontsiraka dia matetika miantehitra amin' ny jono mba hahazoany loharanom-bola lehibe indrindra. Antesaka maro no nifindra monina nanomboka tamin' ny fanjanahantany mba hitady asa any amin' ny faritra hafa amin' ny Nosy. Nanomboka tamin' ny taona 1946, ny governemanta mpanjanaka frantsay dia nandamina ny fitaterana ny mpiasa antesaka sy antandroy mba hiasa any amin' ny faritra hafa amin' ny Nosy amin' ny toeram-pambolena na toeram-pitrandrahana. Isan-taona, tombanana ho 40 % amin' ireo mpifindra monina antesaka rehetra no nifindra monina any ivelan' ny faritaniny tamin' ny fiandohan' ireo taona 1960; matetika ireo mpifindra monina ireo dia mandefa vola any amin' ny fianakaviany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Antesaka&oldid=1043702"
Voaova farany tamin'ny 9 Febroary 2022 amin'ny 07:54 ity pejy ity.